आर्यन संकटमा ! « Kamana
आर्यन संकटमा !
नायक आर्यन सिग्देल नेपाली फिल्म जगत्मा लोकप्रिय छन् । रंगमञ्च र सानो पर्दा हुँदै ठूलो पर्दाको फिल्ममा चक्लेटी नायकका रूपमा छाएका उनका फ्यान असंख्य छन् । वास्तवमा भन्नै पर्दा आर्यनको पुस्ताका नायकहरूमा सबैभन्दा बढी लोकप्रियता उनैले कमाएका छन् ।
तर अचम्मै भन्नुपर्छ, दर्शकमाझ लोकप्रिय यिनै नायक पर्दामा भने प्mल्प छन् । ठूलो पर्दाका फिल्ममा करियर बनाउने क्रममा आर्यनले शुरुआती चरणमा जति फिल्ममा काम गरे, तीबाहेक पछिल्ला उनका फिल्मले व्यावसायिक रूपमा निर्माता घाटाबाहेक नाफा दिन सकेको छैन । छवि ओझाको किस्मतबाट ठूलो पर्दाको फिल्ममा भाग्य परीक्षा दिएका आर्यन विशेष गरी करियरको शुरुआतकालीन समयका लभस्टोरी फिल्ममा जमे । त्यसमध्ये मेरो एउटा साथी छबाट व्यापक सफलता पाएपछि बलिउडका आर्यनले सधैंजसो चर्चित नायक सलमान खान शैलीको लभस्टोरी र चक्लेटी रोल नै रोजे ।
करियरको शुरुआतका केहीलाई छोडेर आर्यनका धेरैजसो फिल्मले निराशाजनक व्यापार नै ग¥यो । त्यही बेला केहीअघि मात्र उनैको समेत लगानीमा बनेको नोभेम्बर रेनले आर्यनलाई फेरि सफलताको स्वाद दिलायो । नवल नेपाल निर्देशित महसुस र लज्जाबाट पनि आर्यन सफल सावित भए । महसुस, नोभेम्बर रेन, लज्जाजस्ता फिल्म चलेपछि आर्यनका पछाडि निर्माताको लाइन लाग्न थाले पनि अत्यन्त आशा गरिएको नाइके जम्न नसकेपछि आर्यनलाई गाह्रो पर्न थाल्यो । त्यसमाथि अर्को आशा गरिएको अल बिदाले पनि हलबाट चाँडै नै बिदा मागेपछि आर्यनको करियर संकटमा पर्न थालेको छ । यो संकट बेलैमा मोचन गर्ने योजना बनाइहाल्नु राम्रो हुन्छ कि आर्यन ब्रो !